Act-On: Nzube-Wuru, SaaS, -gwé ojii Na-Dabere Ahịa akpaaka | Martech Zone
Ahịa nke oge a bụ ahịa dijitalụ. Ogologo ya zuru oke na usoro inbound, usoro ndu na nurturing azum, na usoro ndụ ndị ahịa na njikarịcha mmemme. Iji nwee ihe ịga nke ọma, ndị ahịa chọrọ azịza ahịa ahịa dijitalụ nke nwere ike-ọgaranya, mgbanwe, mmekọrịta na sistemụ na ngwaọrụ ndị ọzọ, kensinammuo, dị mfe iji, dị irè ma na-efu ọnụ.
Ọzọkwa, pasent 90 nke azụmahịa n'ụwa niile pere mpe; otu a ka ndi ahia ha. Agbanyeghị, azaghị azịza ngwa ahịa azụmaahịa zuru oke iji gboo mkpa nke ndị otu pere mpe ma ọ bụ obere azụmaahịa a na-ahụkarị n'ime nnukwu ụlọ ọrụ. Ndị ọrụ na-eji akpaaka ahịa na-ahụ 107% ntụgharị ntụgharị ka mma kacha mma.
Iwu-On Marketing Automation Solution Overview
Na-aga n'ihu na-enye ngwanrọ-dị ka-ọrụ, igwe ojii na-ere ahịa akpaaka ngwọta nke na-eme ka ndị na-ere ahịa soro ndị na-azụ ahịa gafere usoro ndụ ndị ahịa. Ebumnuche ya ka emebere iji nye ụlọ ọrụ obere na ọkara nnukwu uru nke sistemụ azụmaahịa azụmaahịa, na-enweghị mgbagwoju anya na akụrụngwa IT chọrọ.
Actkpụrụ omume-On na-enye ndị na-ere ahịa ohere ịme mkpọsa ahịa ọkaibe n'ofe weebụ, ekwentị mkpanaaka, email, na mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Ọ gụnyere ikike maka: email ịre ahịa, nsuso ndị ọbịa na ebe nrụọrụ weebụ, ọdịda peeji na ụdị, iduga akara na nurturing, mbipụta na mmekọrịta mmadụ na ibe ya, mmemme akpaaka, nyocha A / B, mwekota CRM, njikwa webinar na ndị ọzọ.
Site na Act-On, enwere ike ịtụle ma gbasaa mbọ azụmaahịa dabere na data siri ike karịa mmetụta afọ. Ahịa nwere ike mfe:
Jikwaa ma bulie usoro niile nke ahụmịhe ndị ahịa;
Gwa ahịa na-emefu ego;
Sochie ọrụ olile anya site na ntinye aka na ntụgharị na ire ahịa emechiri emechi ma megharịa ahịa;
Kpesa na mkpọsa, site na ọkwa dị elu na mkpọpu zuru ezu.
Ihe omume Act-On na-anọpụ iche maka iji ya yana yana nkwado ndị ahịa na-enweghị atụ: ndị ọrụ na-agbakarị ma na-agba mkpọsa mbụ ha n'ihe gbasara ụbọchị (usoro ihe nketa nwere ike were izu ma ọ bụ ọnwa) wee nweta nkwado raara onwe ya nye (ekwentị / email ) enweghị ụgwọ ọzọ.
Act-On bụkwa ihe pụrụ iche na ike ya iji gboo mkpa nke ndị na-ere ahịa nke oge a site na ịnabata ọkwa niile nke njem onye na-azụ ahịa ma na-eme ka ahịa nwee ike imetụ akụkụ niile nke usoro ndụ ndị ahịa (site na ịmara na nnweta na njide ndị ahịa na mmụba). Tụkwasị na nke a, ọ na-enye ndị na-ere ahịa ohere itinye ngwa ngwa kachasị mma na ngwa ọrụ ha jiri, yabụ na ha nwere mgbanwe iji hazie nchịkọta ahịa ha iji dabaa mkpa azụmahịa ha na-agbanwe.
Mee nleta nleta ndi nleta
Act-On Kpọtụrụ History
Nnyocha nke Act-On na-egosi na mmemme azụmaahịa ahaziri maka mkpa nke ụlọ ọrụ na-amịpụta nsonaazụ dị elu karịa ndị na-abụghị. N'iburu nke a, Act-On na nso nso a kwupụtara mwepụta nke Act-On Industry Solutions, nke ahaziri maka ụlọ ọrụ dị iche iche gụnyere ahụike, njem, ego, nrụpụta na mkpọsa, yana ndị ọzọ na-abịa. Ezubere iji nyefee ROI dịwanye mma na ngwa ngwa nke ngwa ngwa ahịa, Act-On Industry Solutions na-enye:
content - Ihe nlere anya na ụlọ ọrụ maka ozi ịntanetị, ụdị, na ibe ọdịda na ọtụtụ ihe atụ mkpọsa nke nwere ike ibubata / zipụ na akaụntụ;
Programs - Ejiri arụ ọrụ akpaghị aka iji kwado ọtụtụ usoro ịzụlite na njikọ aka;
benchmarks - Accessnweta ngwakọ arụmọrụ rụpụtara maka ọrụ ahịa na ụlọ ọrụ dị iche iche.
Were Nlegharị vidiyo nke Act-On
Iwu-On Njikọ Insights
Ntinye aka bụ ngwá ọrụ na-akọ akụkọ na-enye ohere ịnweta oge nyocha nchịkọta azụmahịa site na ndebiri mbupụ na ibi ndụ emelitere maka Google Sheets na Microsoft Excel.
Ọ bụ ezie na ịre ahịa na-azụ ahịa abụrụla ihe dị mkpa maka mgbasa ozi n'oge a, njikwa data na-abụ ihe ịma aka dị mkpa nye ọtụtụ ndị na-ere ahịa B2B, dị ka nnyocha e mere n'oge na-adịbeghị anya. Ntinye aka na-eme ka ọ dị mfe ịlele, mbupụ na ịkekọrịta data, nke na-enyere ndị ahịa aka ịkwalite na ịkwalite mkpọsa ha ma na-emekwa ka data ahịa nweta ihe ndị ọzọ ga-enweta na nzukọ ahụ.
Omume kachasị mma n'ịzụ ahịa
74% nke ụlọ ọrụ ndị nakweere akpaaka ahịa na-ahụ ROI dị mma na ọnwa 12 ma ọ bụ obere. Companylọ ọrụ ọ bụla ga-enwe ebumnuche pụrụ iche nke na-akwado usoro azụmaahịa nke aka ya, mana enwere usoro kachasị mma nke nwere ike inyere aka mee ka usoro azụmaahịa azụmaahịa gị kachasị mma:
Zụlite usoro njikwa usoro iwu nke na-akọwa ọrụ na mmekọrịta dị n’etiti ngwa ahịa ahịa isii a dị mkpa na usoro: data, ịhazi ụzọ, iduzi ụzọ, iru eru, ibute nurturing, na metrics. Gbaa mbọ hụ na ire ahịa na ire ahịa kwenyere na ụkwụ ọ bụla, ma were otu asụsụ kọwaa ya.
Dozie usoro ahịa na ebumnuche ya na ngalaba ahia. Ndị ahịa na-abanye ọwa ahịa ahụ ka emechara mkpebi mkpebi karịa mgbe ọ bụla ọzọ. Nke a bụ eziokwu maka ụlọ ọrụ B2B na B2C. Nke a pụtara na ahịa enweghị ike inyefe aha ndị egosipụtara na ngalaba ahịa.
Ọbá akwụkwọ akpaaka ahịa ga-enwerịrị ọdịnaya nke na-eme ka onye gụrụ akwụkwọ gụọ akwụkwọ, nzukọ ahụ ga-adịkwa mfe iji jikọọ na atụmanya ozugbo ha gosipụtara ebumnuche ịzụta.
Chọọ maka ahịa akpaaka ngwọta nke ahụ na-emesi ngwá ọrụ na ike ike maka ndị na-ere ahịa, kama ịchọ ihe IT chọrọ. Ekwesịrị ịzụ ahịa akpaaka site na ndị ọkachamara n'ahịa, ọ bụghị CIO.
Na-aga n'ihu na-eje ozi karịrị ụlọ ọrụ 3,000 sitere na obere site na obere azụmaahịa na obere ọrụ na ngalaba nke nnukwu ụlọ ọrụ, gafee ọtụtụ ọrụ (dịka ọrụ ego, ahụike, imepụta, ngwanrọ, agụmakwụkwọ na teknụzụ). Ndị ahịa ugbu a gụnyere Xerox, Swarovski, Mahadum nke Ohio na ASPCA, otu n'ime okwu ndị ọzọ na-adọrọ adọrọ bụ LEGO Education.
Ndị na-ere ahịa na-enwe nrụgide karịa mgbe ọ bụla iji nyefee nsonaazụ n'akụkụ niile nke ndụ ndị ahịa. Teknụzụ anyị na-enye ndị na - ere ahịa ikike iji data iji chụpụ mkpebi ma na - agbanwegharị ụzọ ndị ahịa ga - esi soro ndị zụrụ ha. N'ihi ya, ndị na-ere ahịa taa na-aza ajụjụ ma na-arụ ọrụ nke ọma, na-enye aka ozugbo na uto ego na afọ ojuju ndị ahịa. Andy MacMillan, CEO, Act-On Software
Ọmụmụ Akpaghị Aka Azụmaahịa - Iwu-On
Na-arụ ọrụ na ndị nkụzi na ndị nchịkwa sitere na K-6 iji mepụta azịza na akụrụngwa maka mmụta klaasị mmekọrịta, LEGO Education tụgharịrị gaa na akpaaka ahịa mgbe ọ matara azịza ahịa email ya enweghị ike ịba ụba na uto ụlọ ọrụ ahụ. N'oge na-adịghị anya Act-On gosipụtara ihe kachasị mma maka mkpa pụrụ iche nke LEGO, ekele maka ọnụego ya na-agbanwe agbanwe na ike idu ndú ya siri ike, ma tinye ya n'ọrụ ngwa ngwa - na-enye echiche ngwa ngwa na piplọ ahịa ahịa nke LEGO na inyere ndị otu ahịa ahịa aka ka ha bute ụzọ ndị na-abata. .
na Na-aga n'ihu, LEGO Education enwela ike itinye mkpọsa akpaghị aka 14 kwa afọ (site na mmemme mmemme email abụọ gara aga), ma nwee ọfụma ugbu a 29 pasent na-atụ anya na-na-ntughari ọnụego.
Tags: ule uleNa-aga n'ihueme-na ahịaeme ihe na akpaaka ahiaomume-na softwareakpaghị aka ahịaigwe ojii na-ere ahịa akpaakamwekota crmnjikwa ndụ ndị ahịaemail Marketingformsmbido peeji nkendu nurturingndu akaraAhịa ahịaakuko mgbasa ozi ahiaakpaaka ahịa dị mkpana-azụlite yaahia omnichannelobere akpaaka azụmaahịa azụmaahịana-ele anya mmadụna-elekọta mmadụ ebipụtanjikwa webinarnsuso websaịtị nleta